IGAD oo Addis Ababa uga shireysa xaaladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
IGAD oo Addis Ababa uga shireysa xaaladda Soomaaliya
Addis Ababa (KON) - Wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa Maantay ka shiri doonaan Xaaladaha ugu dambeeyay ee Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo Addis Ababa u joogta shir madaxeedka ayaa sheegtay in wasiirrada IGAD ay isla gorfeyn doonaan go’aamo xasaasi ah oo ay ka mid tahay xoojinta taageerada la siiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Fowsiya waxay sheegtay in qaraarka wasiirrada loo gudbin doono madaxda dalal ku bahoobay urur goboleedka IGAD.
Kulanka ayaa noqonayaa kii ugu horreeyay oo noociisa ah tan iyo markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu horraantii bisha March khafiifay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddo hal sano ah.
Kulanka ayaa sidoo kale imaanaya maalmo kaddib markii dowladda Jabuuti ay Soomaaliya ugu deeqday 50 gaari oo isugu jira kuwa gaashaamman iyo kuwa lagu qaado ciidanka kaddib munaasabad ka dhacday xarunta ciidanka ee Sheekh Cismaan ee magaalada Jabuuti halkaas oo ay heshiis milateri ku kala saxiixdeen wasiirrada gaashaandhigga labada dal, Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi iyo Xasan Dharaar Hufane.